लामो समयदेखी कायम रहेको नेकपा विवाद झन भन्दा झन गिजोलिदै यतिबेला झन्डै झन्डै पार्टी बिभाजनकै नजिक पुग्न थालेको छ। मुख्य नेताहरुले नै बिभाजनको अभिव्यक्ति दिइराखेको बर्तमान स्थिति न नेकपाको लागि सहज हो नत देशको लागि नै । झन्डै दुई तिहाइ जनमतप्राप्त पार्टीले जनआकांक्षा अनुसार काम गर्नुलो सट्टा उल्टो आन्तरिक किचलोमा फस्नु देशको समग्र राजनीति कै लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
कतिपय राजनैनिक बिश्लेषकहरुले अहिलेको नेकपाको अबस्थालाई नेकपा भित्रको महाभारत भनेर समेत अर्थ्याइरहेका छन । ठ्याक्कै महाभारतकै कथासंग मिल्ने नभएपनी केही घटनाहरुले यसलाइ नेकपा महाभारत भनिनु जायज नै पनि देखाउँछ।
धृतराष्ट्रको भुमिकामा राष्ट्रपति:
महाभारतका एक प्रमुख पात्र हुन, हस्तिनापुरका राजा धृतराष्ट्र। उनी नै एक पात्र थिए जसले महाभारतलाई रोक्न सक्दथे । तर, जेष्ठ सुपुत्र नहुदा नहुदै पनि आफ्नै पुत्र दुर्योधनलाई उनी राज्य सुम्पिन चाहान्थे ।जुन पाण्डवहरुलाइ मंजुर थिएन । न त उक्त कुरा न्यायसंगत नै थियो ।
ठ्याक्कै उक्त कुरा आज हाम्री राष्ट्रपतिमा पनि लागू हुन्छ । कारण, उनी सर्बोच्च पदमा छिन । उनको काम भनेको संबिधानको पालना गराउनु हो । न कि कहिले वामदेवलाइ त कहिले बादललाइ राष्ट्रपति निवासमा भित्र्याएर केपि ओलिको पक्षमा लभिङ्ग गर्नु!
यदि राष्ट्रपति चाहान्छिन भने, प्रधानमन्त्री केपि ओलिलाइ लगाम लगाउन सक्छिन। जसको कारण प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अगाडि हिड्ने आँट नगर्न सकुन। ओलीका निर्णयमा क्षणभरमै तोक लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीले आफू नेकपा भित्रकै ओली समुहकी एक सदस्य भएको पुष्टि गरेकी छन।
दुर्योधन बन्दै ओली
भलै पदिय हिसावले ओली र दुर्योधनको तुलना नमिल्ला तर प्रवृत्तिको कोणबाट हेर्दा ओली र दुर्योधनमा समानता भेट्न सकिन्छ । जसरी दुर्योधन उनका मामा सकुनीजस्ता गलत सल्लाहकारको सल्लाहमा चल्थे। उनमा जे जस्तो अहंकार थियो। उनी जती शक्ति र सत्ताको भोका देखिन्थे आज ओलीमा पनि त्यही देख्न सकिन्छ ।
पार्टी नै फुटोस, देश नै डुबोस तर म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । मेरै कासनमा पार्टी चल्नुपर्छ । र, म भन्दा योग्य मान्छे समकालीन नेतामा अरु छैनन भन्ने उनको जुन मनसाय बुझिन्छ त्यो अहंकारी दुर्योधनसंग मिल्न पुग्दछ । उनका सल्लाहकार र वरिपरिका मान्छेले पनि त्यस्को झल्को सजिलै दिने गर्दछन।
प्रचण्ड युधिष्ठिर, माधव नेपाल अर्जुन र बामदेव भिमको भुमिकामा
संख्यामा पनि पांच जना, अनि पांचै जना विधि र प्रक्रियाका लागि लडिरहेका, पाँचै जना पार्टी एकतामा चिन्तित देखिएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजीमा पंचपाण्डवको अनुहार देख्न सकिन्छ ।
जसरी युधिष्ठिर अन्तिम सम्म पनि लडाइले बंश नाश हुने कुरामा चिन्तित थिए, त्यसैगरि प्रचण्ड पनि बिभाजनले अनिष्ट निम्त्याउने बताउदै आएका छन। कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि पार्टी भित्रै अपमानित हुँदा समेत उनले एकताको कुरा गर्न छोडेका छैनन।
जसरी अर्जुन पाण्डव भित्र तेस्रो बरितामा भएर पनि महाभारतका प्रमुखमध्यका एक पात्र थिए त्यसैगरी माधव नेपाल पनि प्रचण्ड र झलनाथ पछिको पदिय हैसियतमा रहेपनी एक अति महत्वपूर्ण पात्र हुन। लामो समय नेकपा ( एमाले) को नेतृत्व गरेका उनी केपी समुहका सबै मान्छे र तिनका कमजोरीहरुबारे जानकार छन । जुन जुनकुनै लडाइमा पनि अति महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
रोलक्रम अनुसार झलनाथ खनाल भिमको भुमिकामा रहनुपर्ने हो तर यहाँ स्वाभाव र भुमिकाजन्य बिश्लेषण गरिएकोले भिमको भुमिकामा वामदेवलाइ राखिएको छ। हठी स्वभावका र सिधा- सिधा बोल्ने निडरपन वामदेवमा देखिन्छ जुन स्वभाव महाभारतका भिममा पनि थियो ।
साथमा झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नकुल र सहदेवको भुमिकामा राख्न सकिन्छ । उनीहरुले इमानदार भएर विधि र प्रक्रियाको पक्षमा यथासक्य आवाजको लडाइ लडिनै राखेका छन।
कर्णको भुमिकामा रामबहादुर थापा ‘वादल’
जसरी कर्ण पाण्डवकै बंशका थिए तर विविध कारणले कौरव खेमामा पुगेका थिए । त्यसै गरि आज बादल पनि प्रचण्ड खेमाका हुँदा हुँदै पनि ओली खेमामा छन। यदि बादल प्रचण्ड खेमामा हुन्थे भने ओली खेमामा ओलीसहित जम्मा ३ सचिवालय सदस्य रहेन्थे। जसले ओलीलाई झनै एक्लाइदिन्थ्यो तर बादलको साथकै कारण ओलीले पुर्वमाओवादी समुहको पनि आफुलाइ समर्थन रहेको बताउदै आएका छन। यसरी नेकपा महाभारतमा ओली खेमा अन्ततः वादललाइ सेनापती बनाएर अगाडि आउने देखिन्छ ।
के श्रीकृष्णको भुमिकामा आउलान त वावुराम?
महाभारतका मुख्यपात्र श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रका नभएर मथुराका थिए । र, उनै श्री कृष्णले पाण्डव र कौरवलाइ मिलाउने प्रयत्न पनि गरेका थिए र अन्ततः कौरवपक्ष सहमत नभएपछी पाण्डवको पक्षमा लडेका थिए र सत्यको लडाइलाइ जीतमा पुर्याएका थिए । त्यसैगरि नेकपा बाहिरका अर्थात जनता समाजबादीका अध्यक्ष बाबुराम नेकपा भित्रको लडाइमा कृष्णको भुमीकामा उभिन सक्छन र त्यो सम्भव पनि छ ।
बाबुराम ती ब्यक्ति हुन, जसले ओली र प्रचण्ड समूह दुबैको नाडी छामेर निर्णय लिन सक्छन । केही महिना अघि केपि ओलीले बाबुरामलाई आफ्नो सरकारमा सहभागी हुन फोन गरेरै अनुरोध गरेको समाचार पनि आएको थियो । त्यसको एउटै कारण हो, बाबुरामलाई अर्थमन्त्री बनाउन सके उनले ओलीको गिरेको साँख बचाइदिने सामर्थ्य राख्दछन ।
यसैगरी यदि नेकपा बिभाजनकै दिशामा गयो भने प्रचण्ड समुहसंग पार्टी एकता गरेर वा आगामी चुनावमा उक्त समुहसंग चुनावी तालमेल गरेर लडे भने तराईमा ६० देखि ८० प्रतिशत मत उक्त गठबन्धनको पक्षमा झर्ने लगभग पक्का छ । यहि तराइ मधेसमा नै अहिले नेपाली राजनीतिको निर्णायक मत छ । जसमा पहुँच पुर्याएका छन डा. बाबुराम भट्टराईले । त्यसैले नेकपाको जुन पक्षले बाबुरामलाई मिलाउन सक्छ त्यही समुहले जित्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ट्यागहरू: #नेकपा महाभारत
आज रमा एकादशी, व्रत गर्नाले हुन्छन ठुला पापहरु नष्ट (व्रत कथा र विधि सहित)